အန်တီဦး ကို လိုးမိတယ် (အစ/အဆုံး)👈 – Grab Love Story
အမေရဲ့ မောင်၊ ကျနော်ဦးလေးက အောက်ပြည်အောက်ရွာမှာ စက်လှေတွေပိုင်သတဲ့၊ သူ့မိန်းမ ကျနော်ရဲ့ အန်တီတော်စပ်သူကလဲ စီးပွားရေးမှာ မခေ၊ ကုန်ခြောက်ဆိုင်ဖွင့်လို့ အနီးအနားကရွာတွေကို အကြွေးစနစ်နဲ့ ကုန်ခြောက်တွေဖြန့်ချီနေတာ မြောင်းမြတစ်ခွင်မှာ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သတ်ရင် နာမည်ကြီးလင်မယားတွေ၊ သူတို့ညားဖြစ်ကြတာကလဲဒီလို အပျိုလူပျိုဘဝကထတည်းက အန်တီလေးက သူရဲ့ကုန်ခြောက်တွေကို ဦးလေးရဲ့ စက်လှေနဲ့ တင်ပြီး ရွာတွေကို အကြွေးစနစ်နဲ့ ဖြန့်ချီခဲ့တာ၊ စီးပွားဖက်တွေလို့ဆိုရမယ်၊ ဒါကြောင့်လူကြီးတွေက စီးပွားလဲပေါင်း လူချင်းပါ ဆုံဖက်သွားအောင် အိမ်ထောင်ချပေးလိုက်ရော၊ အခုတော့ ဦးလေးတို့လင်မယားက အသက် ၃၅ နှစ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ (၅) နှစ်အရွယ်နဲ့ (၃) နှစ်အရွယ် သားနှစ်ဦးတောင် ထွန်းကားနေခဲ့ပြီ၊
ကျနော်အဖေက အစိုးရတာဝန်နဲ့ အဲဒီမြို့တာဝန်ကျေတော့ ဦးလေးတို့ အိမ်နဲ့ မနီးမဝေး ၂ အိမ်ကျော်မှာ နေရတာပေါ့၊ ဦးလေးက အိမ်မှာနေတယ်လို့ကို သိပ်မတွေ့ရ၊ အချိန်ရှိသရွေ့ စက်လှေတွေရှိတဲ့ ဆိပ်ကမ်းမှာပဲနေတာများတယ်၊ နောက်ပြီးစက်လှေတွေနဲ့လဲ လိုက်သွားတတ်တော့ တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက် နှစ်ရက်လောက်ပဲ အိမ်မှာ ပြန်အိပ်တတ်တာပေါ့၊ အဲဒီလိုဖြစ်နေကြတော့ ဆိုင်အလုပ်သမားတွေ အဝင်အထွက်များတဲ့ အန်တီတို့အိမ်မှာ လာနေဖို့ ကျနော်ရဲ့ မိဘများထံခွင့်တောင်းလို့ ကျနော်ကို သူ့တို့အိမ် ခေါ်ထားတတ်တယ်လေ၊ ကျနော်လဲတော်တော်ပျော်ပါတယ်၊ အန်တီတို့က ကုန်ခြောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ စားစရာသောက်စရာ သရေစာက အတော်များ ခလေးတွေကလဲ ချစ်စရာကောင်းဆိုတော့ မိဘတွေအိမ်တောင် သိပ်မပြန်ဖြစ်တော့ဘူး၊
အန်တီအကြောင်းကို နဲနဲပြောပြရဦးမယ်၊ အန်တီက အသားဖြူဝင်းဝင်းလေး၊ အရပ်ကတော့ သာမာန်မိန်းမတွေအရပ်လောက်ပဲ ၅ ပေနဲ့ ၂ လက်မလောက်၊ ခလေးက နှစ်ယောက်မွေးထားပြီးတော့ ကိုယ်လုံးက အရမ်းမဝဘဲ ပြည့်ပြည့်လေး၊ စိုစိုပြည်ပြည်ထွားထွားကားကားနဲ့ နှစ်သားမွေးထားတော့ နှစ်သွေးလှနေတယ်လို့ပဲ ဆိုရမယ်၊ အန်တီနာမည်က တင်တင်ဦး၊ ကျနော်ကတော့ အန်တီဦးလို့ခေါ်တတ်တယ်၊ အန်တီဦးတို့ အိမ်မှာနေတုန်း ကျနော်အတွက် အလုပ်အရှုပ်ဆုံး အချိန်က ညနေပိုင်းပါ၊ ကျနော်က ၄ နာရီကျော်ရင် ကျောင်းကနေအိမ်ပြန်ရောက် ညနေ ၅ နာရီဝန်းကျင်ဆို အန်တီဦး ကုန်ခြောက်ဆိုင်က ပြန်လာပြီ၊ အန်တီဦးအိမ်ကိုရောက်လာရင် မီးဖိုခန်းထဲကို ဝင်လို့ စီမံစရာတွေကိုစီမံတယ်၊ ၆ နာရီကျော်ရင်ရေချိုးပြီ၊
အန်တီဦးတို့အိမ်ကပျဉ်ကာ လျှာထိုခင်း နှစ်ထပ်အိမ်၊ မိသားစုတွေက အောက်ထပ်မှနေကြပြီး ကျနော်ကတော့ အပ်ါထပ် အန်တီဦးတို့ အိပ်ခန်းအပေါ် တည့်တည့်မှာ၊ ကျနော်ရဲ့ အိပ်ခန်းနောက်ဖက် ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် အောက်မှာရေချိုးတဲ့နေရာ၊ ဘေးပတ်ပတ်လည်ကို အလုံအခြုံကာရံထားပေမယ့် အမိုးမရှိတော့ တစ်ယောက်ယောက် ရေချိုးရင် အပေါ်ထပ်ကနေ မြင်နေရတာပေါ့၊ အန်တီဦးရေချိုးတာကို အမှတ်တမဲ့ကနေ အမှန်တစ်ကယ်ချောင်းကြည့်မိတဲ့ အဖြစ်ကိုရောက်သွားခဲ့ရတယ်၊ ပြတင်းပေါက်တော့ ဖွင့်မကြည့်ရဲဘူး အိမ်ကာထားတဲ့ ပျဉ်ပြားကြားနေ ချောင်းကြည့်ရတာ၊ မချောင်းခင်း အခန်းတံခါးကိုတော့ သတိတရ ပိတ်ရသေးတယ်၊ တော်ကြာတစ်ယောက်ယောက် အခန်းထဲဝင်လာရင် အဆူခံရမှာလေ၊
အန်တီဦးက ရေချိုးတိုင်း အတော်လေးပါးလွှာတဲ့ ထမိန်အဟောင်းနဲ့ ရေချိုးတတ်တော့ ချောင်းကြည့်ရတဲ့ ကျနော်မှာ ရင်တုန်ပန်းတုန်နဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ မြန်မိရောပေါ့၊ ရေစိုနေတဲ့ ကိုယ်လုံးကို အပေါ်စီးကနေ မြင်ရတာ ရင်သားနဲ့ ဖင်တွေဟာလဲ လုံးထွက်နေတာ၊ လုံချည်လေးကို အသာဖြေချလိုက်ပြီး ရင်သားနှစ်ကို ဆပ်ပြာတိုက်နေတာကို တွေ့လိုက်တိုင်း ကျနော်လဲ လိင်တံကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်လို့ ရှေ့နောက် ခပ်သွပ်သွပ်လေး လှုပ်ရှားမိတာပေါ့၊ အန်တီဦးရေးချိုးလို့ပြီးသွားတိုင်းလဲ ရေစိုထမိန်ကိုလဲရင် မျက်တောင်မခတ်ပဲ ချောင်းကြည့်ဖြစ်တာ၊ တစ်ခါတလေ ဗိုက်သားဖွေးဖွေး ဖင်လုံးဖွေးတွေအထိတောင် မြင်ရလိုက်ရတာ အသဲတစ်အေးအေးဗျာ၊ ဂွေလှိမ့်နေတာကိုလဲ မပြီးအောင် ထိမ်းထားရသေးတာ၊ နောက်ထပ် ဇာတ်ဝင်ခန်းက ကျန်သေးတယ်လေ၊
အန်တီဦးက ရေချိုးပြီးသွားရင် အိမ်ခန်းထဲကို ဝင်တော့ ကျနော်လဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ မှောက်၊ ပေါက်နေတဲ့ကြမ်းကြားကနေ ဆက်ချောင်းတာ၊ ရေသုတ်တာတွေ မှန်တင်ခုံရှေ့မှာ သနပ်ခါးသွေးပြီးလိမ်းတာတွေက မထူးခြားသေးဘူး၊ အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းက အဝတ်အစားဝတ်တာပဲ၊ အခန်းထဲမှာ ခလေးတွေမရှိရင် ရင်လျားထားတဲ့ လုံချည်ကို ခါးမှာပြင်ဝတ်လိုက်ပြီး အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ အတွင်းခံဝတ်တယ်၊ အင်္ကျီဝတ်တတ်တယ်၊ အာလုံးလဲပြီးရော ကျနော်လဲ ဂွေလှိမ့်လို့ပြီးသွားလို့ သုတ်ရည်တွေလဲ ထွက်သွားရော၊ နောက်တော့ ကျနော်လဲရေချိုးပြီး ည ရ နာရီဝန်းကျင်မှာ ညစာကို အတူစားကြတာပေါ့၊ အဲဒါက ကျနော်ရဲ့ တစ်နေတာလုပ်ဆောင်မှုတွေထဲက လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါ၊
ညစာအတူစားဖြစ်ရင်လဲ ကျနော်ကသာ စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်နေတာ အန်တီဦးက ဘာမှမသိ၊ ကျနော်ကတော့ အန်တီဦးကျောခိုင်းသွားရင် အတွင်းခံတွေ ဝတ်မထားတတ်တဲ့ ဖင်လုံးတုန်တုန်ကြီးတွေကို ကြည့်ရင်း ရင်တွေခုန်နေတာ၊ အိပ်ရေးတွေလဲ ပျက်၊ ဒူးတွေလဲချောင်၊ မျက်ကွင်းတွေလဲ ကျပေါ့၊ ဂွေတွေလှိမ့်တာများတော့ ခုတင်ဘေးနံရံမှာ သုတ်ရည်တွေပေလို့ ခြောက်နေတဲ့နေရာတွေက အများသား၊ တစ်ခါတစ်လေ အန်တီဦးက အခန်းလာရှင်းပေးတိုင်း ပြောလေ့ရှိတာက “လူပျိုနံ့ရတယ် အခန်းထဲဘာတွေ လုပ်နေသလဲ” တဲ့၊ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိပေမယ့် ကျနော်ရောယောင်ပြီး ရှက်နေတာပေါ့၊ ပြီးရင် “ငါ့တူ လူပျိုဖြစ်နေပြီ” ဆိုတာလဲ မကြာခဏ ပြောတတ်သေးတာ၊
မနက်မိုးလင်းတော့ အိပ်ရာကနိုးရင် အန်တီဦးလဲ ချက်ရပြုတ်ရ ဆိုင်ကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်၊ ကျနော်လဲ ကျောင်းသွား၊ မအားတတ်ကြဘူး၊ ခလေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အဖွားတွေနဲ့ ကျန်ခဲ့တာပေါ့၊ ကျောင်းတက်နေရတဲ့ အချိန်တွေမှာ အချိန်တွေက ကုန်လွယ်လွန်းလိုက်တာ၊ စိတ်တွေက စောနေခဲ့ပြီး ညနေအိမ်ပြန်ရောက်ဖို့သာ စိတ်စောနေခဲ့တာပေါ့၊ ကျောင်းမှာ ကောင်မလေးတွေကို တွေ့နေရပေမယ့် အန်တီဦးရဲ့ ရင်သားနဲ့ ဖင်လုံးတွေကိုသာ စွဲစွဲလန်းလန်း မြင်ယောင်မိနေတာ၊ ဒီလိုနဲ့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေရောက်တော့ ရွာတွေကို ပေးထားတဲ့ ကုန်ခြောက်ဖိုးအကြွေးတွေ လိုက်သိမ်းဖို့ အန်တီဦးခရီးထွက်ရင် လိုက်သွားရတယ်၊ ပထမဦးဆုံးသွားရမယ့်ရွာက ဟိုင်းကြီးကျွန်းနားအထိတောင်၊ ညနေ ၅ နာရီလောက်ထဲက သင်္ဘောစစီးရတာ၊ သင်္ဘောက တစ်ထပ်သင်္ဘောလေး၊ သင်္ဘောပေါ်မှာက ကုန်တင်တာများပြီး ခရီးသယ်တွေက နဲ့တော့ ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စုရယ်၊ ကျနော်နဲ့ အန်တီဦးက သင်္ဘောဝမ်းဗိုက် ကုန်တင်ပေါက်ပေါ်မှာ နေရာရတော့ အခင်းလေးတွေခင်းပြီး ထိုင်လိုက်လှဲလိုက် စကားပြောလိုက်နဲ့ပေါ့၊ တစ်ညအိပ်ခရီးဆိုတော့ ပျင်းစရာ၊ အန်တီဦးကတော့ ကျနော်ကို ကျောင်းအကြောင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း ကျောင်းစာအကြောင်းတွေ မေးလိုက်ပြောလိုက်နဲ့ပေါ့၊
ဒီလိုနဲ့ သင်္ဘောပေါ်မှာတင် ထမင်းချိုင့်နဲ့ ထည့်လာတဲ့ ထမင်းကိုစား၊ ပျင်းရိစရာ ညဦးပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ရင်း ည ၉ နာရီကျော်တော အိပ်ရုံပဲ ရှိတော့တာပေါ့၊ ကုန်ပေါက်နေရာပေါ်မှာက ကျနော်တို့ နှစ်ဦးထဲဆိုတော့ အိပ်မယ်လဲလုပ်ရော အန်တီဦးက သူသယ်လာတဲ့ တစ်ယောက်အိပ် ခြင်ထောင်လေးနဲ့ မုဒုံစောင်ပါးလေးကို ထုတ်လို့ ခြင်ထောင်ကိုလဲ မရမက အဆင်ပြေအောင်ထောင်လိုက်သေးတာ၊ နောက်တော့ ကျနော်နဲ့အန်တီဦး ခြင်ထောင်လေးထဲမှာ ပူးပူးကပ်ကပ်ပဲ လှဲအိပ်ကြတာပေါ့၊ သင်္ဘောရဲ့ စက်သံကလဲ ဆူညံတော့ အိပ်လို့မရ၊ လေကလဲတိုက်တော့ ချမ်းသေး၊ နောက်တော့မှ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း သိတိထားမလာတာ အန်တီဦးရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့လေးပဲ၊
ဒီကိုယ်သင်းနံ့ကြောင့် စိတ်ထဲမှာပြန်မြင်ယောင်လာတာက အန်တီဦးရေချိုးနေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေပဲ၊ အဲဒီတော့ ကျနော်လိင်တံက အလိုလိုပဲ မာကျောထောင်မတ်လာခဲ့ပြီ၊ အန်တီဦးသိသွားမှာ စိုးရိမ်တော့ ကျောခိုင်းလိုက်ပြီး တစ်ဖက်လှည့်အိပ်ရင်း လိင်တံကို ပေါင်ကြာမှား ညှပ်ထားမိတယ်လေ၊ ဒီလိုနဲ့ တော်တော်လေးကြာလာတော့ လေကတိုက်လို့အေးလာတယ်၊ အန်တီဦးက တစ်ထည်တည်း သယ်လာတဲ့ မုဒုံစောင်ပါးလေးကို ကျနော်ကိုလဲ ခြုံပေးတာပေါ့၊ စောင်ကသေးနေတော့ နှစ်ဦးသားအတွက်က မလုံခြုံတော့ အန်တီဦးက ကျနော်ကို ကျောခိုင်းလို့ဘေးတိုက်အိပ်လိုက်ပြီး ကျနော်ကိုလဲ သူနောက်ကျောကို မျက်နှာမူခိုင်းပြီး ကပ်အိပ်ခိုင်းတော့တာ၊ ကျနော်တော့ ဒုက္ခရောက်ပြီ ပေါင်ကြားထဲက ထောင်နေတဲ့ လိင်တံကို အန်တီဦးဖင်ကို သွားမထိုးမိအောင် ကိုယ်လုံးကို ခွာထားရင်း စောင်ကိုခြုံတော့ စောင်သေးသေးနဲ့ အဆင်မပြေပြန်၊
နောက်တော့ အန်တီဦးက လက်နောက်ပြန်နဲ့ ကျနော်ရဲ့ ခါးကို ဆွဲလိုက်ပြီး သူနောက်တင်ပါးကို ကပ်ခိုင်းလိုက်တော့ နှစ်ယောက်သား စောင့်အောက်ကိုတော့ ရောက်သွားပါရဲ့ ကျနော်လိင်တံက အန်တီဦးရဲ့ ဖင်ကို သေသေချာချာ ထောက်မိနေပြီ၊ အဲဒီတော့မှာ အန်တီဦးဆီက အသံထွက်လာတော့တယ် “ငါ့တူ လူပျိုဖြစ်နေပြီပဲ” တဲ့၊ ခဏလေးငြိမ်သက်သွားပြီးနောက်မှာ အန်တီဦးရဲ့ လက်က ကျနော်လက်ကို လှမ်းယူလို့ သူကိုယ်လုံးကို ဖက်ထားခိုင်းလိုက်ပြီး ကျနော်လက်ဖဝါးတွေကို သူ့ရဲ့ ရင်သားပေါ်မှာ တင်လိုက်ပြီး သူလက်က အပေါ်ကနေ ဖိအုပ်လို့ ထားတာပေါ့၊ ပြီးတော့ ကျနော့်ကိုပြောသေးတာ “အိပ်တော့” တဲ့၊
ဘယ်လိုမှ အိပ်မရပါဘူးဗျာ၊ စက်သံက ဆူဆူညံညံ စိတ်တွေက ဂယောက်ဂရက်၊ ရင်တွေက သင်္ဘောစက်သံနဲ့အတူ တစ်ဒုန်းဒုန်း၊ လိင်တံကလဲ ပြန်ကို မပျော့နိုင်တော့ဘူး၊ ဖင်ကိုတည့်တည့် ထောက်ထားမိနေတာ၊ ပိုဆိုးတာက အန်တီဦးက ညောင်းလို့ နဲနဲလှုပ်လိုက်ရင် ဖင်က လိင်တံကို ပွတ်မိသွားတော့ ထိပ်တွေတောင် ကျင်သွားတယ်၊ လိင်တံက တောင်ပါများတော့ နာလို့တောင်လာပြီ၊ ခဏနေတော့ အန်တီဦးလဲ အပေါ့သွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီး ထထွက်သွားတော့ ကျနော်ရဲ့ လိင်တံက စောင်အောက်မှာ ထောင်ထောင်တန်းတန်းကြီး ကျန်ခဲ့ရော၊ အန်တီဦး ပြန်လာလို့ အိပ်ရင် ခုနကလိုများ အိပ်ခွင့်ရပါတော့မလားလို့တောင် စိုးရိမ်မိလာတယ်၊
ပြန်ရောက်လာတော့ အန်တီဦးလဲ ခြင်ထောင်ထဲကိုဝင်လာပြီး စောင်အောက်ကို အသာလေးတိုးဝင်လာတော၊ ကျနော်လဲ မျက်စိမှိတ်လို့ ကြိုးစားအိပ်နေတာပေါ့၊ ရင်ထဲမှာလဲ ပျော်သွားတယ် အရင်အတိုင်းပဲ အိပ်ပြန်ပြီ၊ ဒီတစ်ခါပြန်အိပ်ဖြစ်တော့ ကျနော်လိင်တံက အန်တီဦးရဲ့ ဖင်ကြားတည့်တည့်မှာပေါ့၊ သင်္ဘောကလဲ ပင်လယ်ဘက်ကို ထွက်နေတော လှိုင်းတွေတဲ့ လူးလားပြီး ကျနော်တို့နှစ်ဦးလဲ ခြင်ထောင်ထဲမှာ တစ်လှုပ်လှုပ်နဲ့လေ၊ ဖင်ကြားကို ကျနော်ရဲ့ လိင်တံက အဆက်မပြတ်ပွတ်နေတော့တာ၊ ကြာလာတော့ လှိုင်းကြောင့်လား အန်တီဦးပဲ ကိုယ်တိုင်ပဲ လှုပ်နေသလားမသိတော့ဘူး၊ အန်တီဦးရဲ့ ခါးက အသာလေးရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်နဲ့ လှုပ်နေတော့ ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖီလင်ဗျာ၊
ကျနော်လက်တွေကလဲ အင်္ကျီပေါ်ကနေ အန်တီဦးရဲ့ ရင်သားတစ်ဖက်ကို ညှစ်ကိုင်ထားမိပြီ၊ အလုံးအထည်က ကျနော်ရဲ့ လက်ဝါးထက်တောင် ကြီးနေပြီး လက်ဝါးနဲ့တောင် မအုပ်မိဘူး၊ အဲလို ရင်သားကို ညှစ်လိုက်ရင် ခါးအောက်မှာ အန်တီဦးရဲ့ ခါးကကော့လို့ ဖင်ကကျနော် လိင်တံရှိရာကို ပိုပြီးတိုးကပ်လာသလိုပဲ၊ မီးအလင်းရောင်ကလဲနဲ ခြင်ထောင်ကလဲ ထောင်ထား စောင်အောက်မှာ လှုပ်ရှားနေကြတာဆိုတော့ ကျနော်တို့ဦးကို ဘယ်သူမှ သတိမထားနိုင်လောက်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်၊ အန်တီဦးရဲ့ လက်တွေက စောင်ထဲမှာ ခါးအောက်ပိုင်းကို ဆင်းလာပြီး အရင်ဆုံး ကျနော်လိင်တံကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်လိုက်တာ ခံလိုက်ရတယ်၊ နောက်တော့အန်တီဦးက သူ့ရဲ့ ထမိန်ကိုအပေါ်ကို ဆွဲတင်လိုက်ပြီး ကျနော်ရဲ့ ပုဆိုးကိုလဲ သူပဲ ဆွဲလှန်လိုက်တာပေါ့၊ အဲဒီတော့မှာ အသားချင်းထိမိလို့ အန်တီဦး အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဝတ်မထားတော့ဘူးဆိုတာကို သိလိုက်တော့တယ်လေ၊
အန်တီဦးက သူ့ရဲ့ လက်နဲပဲ ကျနော်ရဲ့ လိင်တံကိုင်လို့ သူ့ရဲ့ ဖင်ကြားထဲကို ဖိထည့်လိုက်တော့တာ၊ ဇိမ်ပဲဗျာ လိင်တံက ဖင်ကြားထဲမှာ လုံးဝ ညှပ်နေတော့တာ၊ ကျနော်လဲ တတ်သလောက်မှတ်သလောက်နဲ့ ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်ကလေး လုပ်မိတော့တာပေါ့၊ အန်တီဦးက ခါးကိုခွက်လို့ ဖင်ကိုအစွမ်းကုန် ကော့ပေးထားတော့တာပေါ့၊ နောက်တော့ အန်တီဦး ပေါင်လေးတစ်ချောင်း အသာကြွပြီး လက်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲတော့ မသိ၊ ကျနော်ရဲ့ လိင်တံထိပ်ခေါင်းက ပူနွေးစိုစွတ်နေတဲ့ အပေါက်ကလေးထဲကို ရောက်သွားသလိ ခံစားလိုက်ရတယ်၊ ကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း တုန်းပါ့၊ အဲဒီအချိန်အထိ ကျနော်လိင်တံထိပ်ခေါင်းက ဖင်ထဲဝင်သွားတာလား ပိပိထဲ ဝင်သွားတာဆိုတာကို သေသေချာချာမသိခဲဘူး၊
နောက်တော့မှ လက်တစ်ဖက်က ပိပိအမွှေးတွေကို စမ်းကြည့်ရင်း လက်နဲ့ ကိုင်ကြည့်တာ လိင်တံက ပိပိထဲမှာဆိုတာကို သိလိုက်တော့တယ်၊ အန်တီဦးရဲ့ အမွှေးတွေက အတော်ကို ထူထဲပြီး ပျော့ပြောင်းနေတော့တာ၊ ဆီးခုန်ကလဲ ဖောင်းဖောင်းတင်းတင်းကြီး ဆိုတာကိုလဲ လက်နဲ့ အသေအချာ ကိုင်မိလိုက်တော့တယ်၊ အန်တီဦးရဲ့ ခေါင်းက ကျနော်မျက်နှာနားကို တိုးလို့ကပ်လာတော့ ကျနော်လဲ လုပ်မိလုပ်ရာ ပါးကိုနမ်းမိလိုက်ရော၊ အန်တီဦးရဲ့ လက်က ကျနော်နဲ့ တင်ပါးကို သူဖက်နဲ့မကပ် ကပ်အောင် ဆွဲပေးနေရင်း ကျနော်တို့နှစ်ဦးသား စောင်အောက်မှာ အသာလေး ညှောင့်နေကြတော့တာပေါ့၊ လိင်တံကတော့ ထိပ်ခေါင်းလောက်ပဲ ပိပိထဲကိုဝင်နေပြီး ကျန်နေတဲ့ လိင်တံတစ်ချောင်းလုံးက အန်တီဦးရဲ့ဖင်နှစ်လုံးကြားမှာ အလျားလိုက်ညှပ်နေခဲ့တာပေါ့၊ ဘယ်လောက်ပဲ ဝင်နေနေ ဘယ်လိုပဲညှပ်ညှပ် ကျနော်တော့ ကောင်းနေတော့တာပဲ၊ ကောင်းနေတယ်သာပြောရတာ သင်္ဘောပေါ်မှာ အားရပါးရလုပ်လို့လဲမရ၊ ကုန်ပေါက်ကိုပိတ်ထားတဲ့ ပျဉ်ပြားကြီးတွေကလဲ မညီမညာဆိုတော့ ကြာတော့ ခါးရိုးတွေနာလာရော၊ လိင်တံကလဲ ထိပ်ဖျားလောက်ပဲဝင်နေ၊ ပိပိထဲလဲ အဝလောက်မှာပဲ ပြူတစ်ပြူတစ်ဖြစ်နေတော့ ကျနော်ရော အန်တီဦးပါ နှစ်ယောက်လုံးအားမရတော့ဘူး၊ ပုံစံပြောင်းလိုက်ရင်လဲ ခြင်ထောင်အပြင်ပဲ ရောက်ကုန်မလား၊ ခြင်ထောင်ကြိုးပဲ ပြတ်ကျကုန်မလား သိတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့် အန်တီဦးက ဒီတိုင်းလေးပဲ ထည့်ထားပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေး နေရင်း အိပ်တော့လို့ပြောလာတယ်၊ ကျနော်လဲ ပြောတဲ့ အတိုင်းနေတာပဲ၊ အိပ်လို့လဲ မရ လိင်တံက ဘယ်လိုမှ ပြန်မကျ တင်းမာနေဆဲပဲ၊
နောက်တော့ အန်တီလေးက ကျနော်ရဲ့ လိင်တံကို ပိပိထဲကနေထုတ်လိုက်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်လို့ အိပ်တော့တာပေါ့၊ ကျနော်လဲ အဲလိုလှည့်လာတော့ ပါးကိုနမ်းလိုက်ပြီး လက်တွေက ရင်သားပေါ်မှာ ထားလို့ ဖိပွတ်နေမိတော့တာ၊ အကျီက ရှေ့ကြယ်သီးနဲ့ ဆိုတော့ လက်နဲ့ စမ်းရင် ကြယ်သီးတွေလဲ ဖြုတ်မိလိုက်တော့ မီးရောင်မှိန်မှိန်အောက်မှာ ဝတ်ထားတဲ့ ဘော်လီရဲ့ အပေါ်ပိုင်းက ရင်သားတွေဖွေးကနဲ ပေါ်လာပါလေရော၊ ဒါကြောင့် ကျနော်လဲ အန်တီဦးကို နို့ဆို့ချင်တယ်လို့ ပြောမိလိုက်တော့ ခဏတော့ တွေဝေနေပြီး နောက်တော့ ဘော်လီချိတ်တွေကို ဖြုတ်ပေးတာပေါ့၊ ကျနော် ညနေတိုင်းချောင်းကြည့်ခဲ့ရတဲ့ ရင်သားဖြူဖြူထွားထွား နှစ်ခု အခုတော့ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရပြီ၊
ခလေးတစ်ရောက်လို နို့သီးခေါင်းကပိုပဲ မဲပြီးစို့တော့ အန်တီဦးကတောင်တားယူရတယ်၊ “တစ်ခြားနေရာကို လျှာနဲ့ လျှက်လို့ရတယ်” လို့ပြောတော့တာ၊ ကျနော်လဲ မလုပ်တတ်တော့ အန်တီဦးပြောတဲ့ အတိုင်းလိုက်လုပ်တော့တာပေါ့၊ ကြာလာတော့ အန်တီဦးရဲ့ အသက်ရှုထုတ်လိုက်တဲ့လေတွေက ကျနော်ရဲ့ ဆံပင်ပေါ်ကို ကျနော်ပြီး ကျနော်ရဲ့ ခေါင်းကို လက်နဲ့ ကိုင်ရင်း ရင်သားတွေနဲ့ ဖိကပ်ထားတယ်လေ၊ အန်တီဦးရဲ့ ပေါင်တစ်ဖက်ကလဲ ကျနော်ကိုခွထားရင်း ခါးကိုရှေ့ ကော့လို့ ပိပိကို ကျနော်ရဲ့ ကိုယ်လုံးနဲ့ ဖိပွတ်နေတော့တာ၊ အန်တီဦးက အဲဒီလိုကော့ပြီး ပွတ်နေတော့ ကျနော်လက်တွေက အောက်ကိုဆင်းသွားပြီး ပိပိထဲကို လက်ညှိးထိုးထဲ့ကြည့်လိုက်တာ ပိပိကတော့ အပေါက်ကျယ်နေပြီ အရည်တွေက အတော်ကိုရွှဲနစ်နေတော့တာလေ၊
ကြားဖူးနားဝနဲ့ လုပ်တတ်သလောက်လုပ်ရင်း လက်ညှိးကို ပိပိထဲမှာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်တွေလုပ်လိုက် ပိပိရဲ့ အပြင်မြောင်းထဲ ပွတ်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတော့တာ၊ လက်နဲ့ ပိပိတစ်ခုလုံးကိုပွတ်နေရင်း သတိထားမိလိုက်တာက အန်တီဦးရဲ့ အစိက တော်တော်ကြီးနေတယ်လို့ ထင်နေမိရတယ်၊ လက်သန်းထိပ်လောက်တောင် ရှိလောက်မယ်လို့ ထင်မိတာပေါ့၊ ကိုင်လို့ကောင်းကောင်းနဲ့ အစိကိုပဲ ကိုင်လိုက်ပွတ်လိုက်လုပ်နေတာ အန်တီဦးလဲ တစ်အစ်အစ်နဲ့ အံကျိတ်လို့ ငြီးသံတွေထွက်လာပြီ၊ ကျနော်လဲ လက်ညှိးကို ပိပိထဲကိုထည့်ထားပြီး လက်မနဲ့ပဲ အစိကြီးကို ပွတ်နေမိတော့တာပေါ့၊ တော်တော်လေးကြားသွားတော့ အန်တီဦးရဲ့ ကိုယ်လုံးက တောင့်င်းတောင့်တင်းကြီးဖြစ်သွားပြီး ကျနော်ကို တင်းနေအောင်ဖက်ထားပြီးနောက် ငြိမ်ကျသွားတော့တာ၊ ဘာဖြစ်သွားမှန်းတော့ ကျနော်လဲမသိဘူး၊ အစိကြီးကို ဆက်ပွတ်တော့ တုန်တက်သွားပြီး ကျနော်လက်ကို ပိပိကနေဆွဲဖယ်လို့ လက်ညိုးကို သူ့လက်နဲ့ သုတ်ပေးတော့တာပေါ့၊
ပြီးတော့ အန်တီဦးက ကျနော်ကို ဖက်ထားရင်း သက်ပြင်းတွေ အခါခါချလို့ မမောဖြေနေပုံပဲ၊ ပြီးတော့ ကျနော်ကို ခပ်တင်းတင်းဖက်လို့ နှခမ်းခြင်းနမ်းတော့ ကျနော် အသက်ရှူတွေ ကျပ်သွားပြီးမောသွားတော့တယ်၊ နောက်တော့ အန်တီဦးက ကျနော်လိင်တံကို သူ့လက်နဲ့ကိုင်လိုက် ပွတ်ပေးတယ်လေ၊ အထိအတွေ့ကိုက အတော်ကွာခြားတာပဲ၊ အရင်တုန်းက ကိုယ်လက်နဲ့ ကိုယ်ကိုင်ပြီး ဂွေလှိမ့်တာနဲ့ အန်တီလေးကိုင်ပေးတဲ့ အထိအတွေ့ တော်ကြီးကို ကွာခြားနေတော့ လိင်တံက ရွစိရွစိနဲ့ ကောင်းလိုက်တာဗျာ၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခုဆိုးတာက အန်တီဦးက ကျနော်ကို အရည်ထွက်သွားတဲ့ အထိလုပ်မပေးဘူး၊ ဂွေလှိမ့်ပေးနေတာတွေရပ်လိုက်ပြီး “နောက်မှ ပြီးအောင်လုပ်ပေးမယ် အခုအိပ်ကြမယ်” တဲ့၊ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ နားမလည်ဘူး၊ ပြောတဲ့အတိုင်းတော့ နားထောင်းလိုက်ပြီး အန်တီဦးဖက်ပြီး အိပ်လိုက်တော့တယ်လေ၊
မနက်မိုးလင်းခါစမှာ သင်္ဘောက ဆိပ်ကမ်းကပ်လို့ ဆင်းခဲ့ကြတယ် ပြီးတော့ ရွာထဲက အကြွေးရစရာရှိနေတဲ့ ကုန်ခြောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ အိမ်ကိုသွားကြပြီး ကိုယ်လက်သန့်ရှင်းရေးလုပ် ရေချိုးအဝတ်အစားတွေလဲပြီးနောက် ဆိုင်ရှင်နဲ့ မနက်စာစားရင်း စကားပြောကြတာပေါ့၊ မနက် ၉ နာရီလောက်တော့ စက်လှေနဲ့ ရွာနီးချူပ်စပ်က အခြားရွာလေးတွေကို သွားလို့ အကြွေးလိုက်တောင်းကြတယ်လေ၊ ညနေ ၄ နာရီထိုးတော့မှာ တည်းခိုမယ့် ရွာက အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာပြီး အနားရတော့တယ်၊ အိမ်ရှင်က ကျနော်နဲ့ အန်တီဦးတို့ ညအိပ်ဖို့ အခန်းကျယ် တစ်ခန်းပေးထားတယ်လေ၊ ဒီရွာမှာ ညအိပ်ရတော့မှာပေါ့၊ ညနေပိုင်းရေချိုးပြီး အဝတ်အစားတွေလဲတော့ အန်တီဦးရဲ့ ရင်သားတွေကို ကျနော်တစ်ကြိမ်တွေခွင့်ရခဲ့သေးတာ လိင်တံတောင် တော်တော်မာတောင်သွားသေးတယ်၊ အန်တီဦးကလဲ အဲဒါကိုသိတော့ ကျနော်လိင်တံကို လက်နဲ့ ကိုင်လိုက်ပြီး ပါးကိုနမ်းရင်း ” ညရောက်မှ” တဲ့၊ ရင်ခုန်လိုက်တာလေ၊
နောက်တော့ အန်တီဦးက အိမ်ရှင်နဲ့ စကားပြောရင်း ကျန်ခဲ့ပြီး ကျနော်ကတော့ ရွာထဲလျှောက်ကြည့်တော့တာပေါ့၊ ဘာမှတော့ ထူးထူဆန်းဆန်းမရှိပါဘူး၊ အိမ်ခြေ ၁၀ဝ ကျော်လောက်ရှိတဲ့ ရွာကြီးပါ၊ လမ်းဆုံးတော့ လယ်ကွင်းနဲ့ ဆားကွင်းတွေပဲတွေ့ရတယ်၊ ရွာလယ်မှာတော့ တောသူတွေ ရေခပ်ဆင်းနေကြတာပေါ့၊ ၆ နာရီခွဲကျော်လို့ မှောင်တော့မှပဲ အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး အန်တီဦးက ညနေစာ ထမင်းအတူစားဖို့ စောင့်နေလေရဲ့၊ ညနေစာစားပြီးတော့ အန်တီဦးတို့က အလုပ်ကိစ္စစကားဆက်ပြောကြ၊ ကျနော်ကတော့ အတော်ပျင်းနေပြီ၊ ည ၈ နာရီကျော်တော့မှ အိမ်ရှင်ကို နှုတ်ဆက်လို့ အပေါ့သွားလိုက်ပြီး အိမ်ခန်းထဲဝင်ခဲ့ကြတော့တယ်၊ အိပ်ခန်းထဲမှာက ဟိုဖက်ဒီဘက် ခြင်ထောင်နှစ်လုံး ထောင်ပြီး အိပ်ရာခင်းလိုက်တာပေါ့၊ နောက်တော့ အခန်းတံခါးပိတ် မှန်အိမ်မီးကို မှုတ်လိုက်ကြပြီး ကျနော်ကို သူ့အိပ်ရာဖက်ကို လက်ဆွဲလို့ ခေါ်ပါလေရော၊ မှောင်သွားတော့မှ သတိထားမိတာ ကျနော်ဘေးဘက် ကပ်ရပ်မှာ အခန်းတစ်ခန်းကရှိနေသေးတာကိုး၊
ကျနော်တို့ နှစ်ဦး အချိန်အတော်ကြာအောင် ဖက်ထားရင်း နှခမ်းချင်းနမ်းမိကြတော့တယ်၊ အန်တီဦးက ကျနော်ကို နမ်းတဲနည်းတွေ သင်ပေးနေတာပေါ့လေ၊ နမ်းနေရင်းနဲ့လဲ အန်တီဦးရဲ့ လက်က ထောင်မတ်နေတဲ့ လိင်တံကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ပြီး ရွရွလေးပွတ်ပေးနေတာပေါ့၊ အန်တီဦးက သူလုံချည်ကို ခါးအထက်ဆီလှန်တင်လိုက်တယ် ပြီးတော့ကျနော်ရဲ့ ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ ကိုယ်လုံးပေါ်သို့ ကျနော်ကို ဆွဲတင်လိုက်တော့တယ်၊ ဆီးခုန်ချင်းထိကပ်လို့ အန်တီဦးရဲ့ ကိုယ်ပေါ်ကို ရောက်သွားခဲ့ရပြီ၊ အင်္ကျီကိုလှန်တင်လိုက်တော့ ဘယ်အချိန်ထဲက ဘော်လီကိုချွတ်ထားမှန်းတောင်မသိ ရင်သားနှစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရရော၊ အန်တီဦးရင်သားတွေက ကြီးတယ်လို့ဆိုရမယ်၊ ခလေးနှစ်ယောက်ကို နို့တိုက်ထားခဲ့ပေမယ့် ရင်သားတွေက တင်းတင်းရင်းရင်းပဲ ရှိနေသေးတာ၊ နို့သီးခေါင်းတွေကတော့ ရှည်ထွက်နေပြီ၊ ကျနော်လဲ ညက သင်္ဘောပေါ်မှာ ပြောပြထားခဲ့တဲ့အတိုင်း ရင်သားတွေကို နမ်းပေးလိုက်တော့ နို့သီးခေါင်းတွေ မာကျောလာလေရော၊ ပြောရရင် ကျနော်က စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး ဒါပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတောင် မသိ၊ အန်တီဦးရဲ့ ဦးဆောင်စေခိုင်းတဲ့ အတိုင်းပဲ လုပ်ရတော့မယ်လေ၊ ရင်သားတွေကိုနမ်းပေးနေတုန်း အန်တီဦးရဲ့လက်တွေက ကျနော်ရဲ့ခေါင်းကို မသိမသာအောက်ဖက်ကို တွန်းနေတာခံနေရတယ်၊ အန်တီဦးရဲ့ ကိုယ်လုံးကလဲ ခေါင်းရင်ဖက်ကို တိုးသွားတော့ ကျနော်မျက်နှာက အန်တီဦးရဲ့ ပေါင်ကြားထဲက ပိပိနေရာကိုရောက်သွားရော၊ ကျနော်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို မသိဘူး၊ မီးရောင်ကလဲ မရှိတော့ ဘာကိုမှာ ပီပီပြင်ပြင်မမြင်ရဘူးလေ၊ အန်တီဦးရဲ့ လက်က ကျနော်ခေါင်းကို ကိုင်ထားရင်း ဖိလိုက်တော့ ပိပိကြီးနဲ့ ကျနော်မျက်နှာ အပ်သွားတော့တာ၊ ပြီးတော့မှ သူ့ရဲ့ အစိကို ပြူးထွက်လာအောင် လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အစိဘေးသားတွေကိုဖြဲပေးပြီး လျှာနဲ့လျှက်ပေးလို့ လေးသံလေးနဲ့ ပြောတာပေါ့၊
ကျနော်လဲ လုပ်မိလုပ်ရာနဲ့ နို့သီးခေါင်းလောက်ရှိနေတဲ့ အန်တီဦးရဲ့ အစိကို လျှာနဲ့ စုပ်လိုက် လျှက်လိုက်နဲ့ စလုပ်တော့တာ၊ အစိကိုစုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အန်တီဦးရဲ့ လက်တွေက ကျနော်ရဲ့ ဆံပင်ထဲ လက်နဲ့ ထိုးဆွနေပြီး ခါးကကော့တက်လာတော့တာ၊ အစိရဲ့ ဘေးသားနုလေးတွေကို လျှာနဲ့ လျှက်လိုက်ရင် အစိနဲ့ လျှာ မထိ ထိအောင် နေရာလိုက်ရွှေ့နေတာပေါ့၊ အန်တီဦးလဲ အစိကိုလုပ်ပေးခံရတာ အတော်ကြိုက်ပုံပေါ်တယ်၊ ပိပိထဲက အရည်တွေထွက်လိုက်တာ ဒလဟောပဲ ကျနော်ရဲ့ မေးစေ့မှာ အရည်တွေပေကျံနေပြီလေ၊ အစိကိုလျှက်ပေးနေရင်း လက်ညှိုးကို ပိပိထဲထိုးထဲ့လိုက်တယ်၊ ခလေးနှစ်ယောက်တောင် ဒီနေရာကမွေးထားတာ ဆိုတော့ ကျယ်နေပြီ၊ ဒါကြောင့် နောက်ထပ်လက်ခလယ်ပါထိုးထည့်ပြီး ရှေ့နောက် လှုပ်ရှားပေးတာပေါ့၊ အန်တီဦးကတော့ အောက်နှခမ်းကို သွားနဲ့ ကိုက်ထားတာကို အမှောင်ထဲမှာ မြင်နေရတာပေါ့၊
ကျနော်လဲ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီး ပိပိထဲက လက်နှစ်ချောင်းကို ပြန်ထုတ်၊ ဘေးသားတွေကိုဆွဲဖြဲလိုက်တော့ ပိပိရဲ့ အပေါက်ဝက ဟလာလာပြီ၊ လျှာကိုအထဲကို ရောက်နိုင်သမျှ သွင်းလိုက်ပြီး ပိပိရဲ့ အဝနားမှာ ငှက်တွေတောင်ပံခတ်သလို လျှာကို ခပ်မြန်မြန်လေး လှုပ်ရှားပေးလိုက်တာ အန်တီဦး ဖင်ကြီးက အိပ်ရာပေါ်ကနေ တစ်တောင်လောက်ကြွတက်လာပြီး လက်တွေက ကျနော်ခေါင်းကို ပိပိနဲ့ ဖိကပ်လို့ ငြိမ်ကျသွားပါလေရော၊ ကျနော်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲလဲ အန်တီဦးရဲ့ ပိပိထဲက ညှီစို့စို့ အရည်တွေဝင်ကုန်ပြီ၊ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိတော့ အန်တီဦးက သူ့ကိုယ်လုံးပေါ်ကို ကျနော်ကိုဆွဲခေါ်တော့တယ်၊ ကျနော်လဲ ပေါ်ပြန်ရောက်ရော အန်တီဦးက ပေါင်ကိုလဲ ကားထား ပိပိကလဲ ကျယ်နေဆိုတော့ ကျနော်ရဲ့ လိင်တံဟာ လက်နဲ့တောင် ထိန်းပြီးထည့်စရာမလို၊ ပိပိထဲကို တစ်ဆုံးဝင်သွားရော၊
အန်တီဦးဆီက ” ဟယ် ဝင်သွားပြီ” လို့ ပြောသံကြားလိုက်ရတယ်၊ ပြီးတော့ “ပြန်ထုတ်လိုက်ဦး” လို့ ပြောတော့ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိ လိင်တံကို ပိပိထဲကနေထုတ်လိုက်တော့တယ်၊ ကျနော်ကို ပတ်လက်အိပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး အန်တီဦးက ခေါင်းရင်းဘက်ကို ဖင်ပေးလို့ လေးဘက်ထောက်ထားရင်း ကျနော်လိင်တံကို သူ့ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တော့တာ၊ ကောင်းလိုက်တာဗျာ တစ်ခါမှ မခံစားဘူးတဲ့ အရသာ ကိုယ်ဟာကို ဂွေလှိမ့်ရတာနဲ့လဲမတူ၊ အန်တီဦးလက်နဲ့ ကိုင်ပြီး လုပ်ပေးတဲ့ အရသာမျိုးလဲ မဟုတ်၊ အာခံတွင်းနွေးနွေးလေးထဲမှာ လိင်တံထိပ်ခေါင်းကို နှခမ်းနဲ့ စုပ်ထားပြီး ခေါင်းပတ်ပတ်လည်ကို လျှာနဲ့ ပတ်နေတော့တာ၊ ထိပ်က အပေါက်လေးကို လျှာထိပ်နဲ့ ထိုးလိုက်ရင်များ အသဲတွေအေးသွားပြီး ကျင်သွားတာတောင် ခံစားလိုက်ရတယ်၊
နောက်တော့ သူ့ရဲ့ တံတွေးတွေနဲ့ လိင်တံတစ်ချောင်းလုံးကို စိုစွတ်အောင်လုပ်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ စုပ်လို့ အထက်အောက် လှုပ်ရှားတော့တာ၊ ကျနော်လဲ ထိန်းမရချင်တော့ဘူး၊ လေးဘက်ထောက်ထားတဲ့ အန်တီဦးရဲ့ ဖင်နောက်ကနေ ပိပိထဲကို လက်ညှိးထိုးထည့်ပြီး ဇိမ်ခံလိုက်တာ ခဏပဲကြာတယ်၊ သုတ်ရည်တွေက အန်တီဦးရဲ့ ပါးစပ်ထဲပန်းဝင်သွားရောဗျာ၊ ကျနော်လဲ အားလည်းနာ ကြောက်လဲကြောက် ဘာအပြောခံရမလဲလို့ စောင့်ကြည့်နေတာ၊ အန်တီဦးက ဘာမှ မပြောပဲ ကျနော်ရဲ့ သုတ်ရည်တွေကို မျိုချလိုက်လေရော၊ ပြီးတော့မှ ကျနော်ရဲ့ ဘေးမှာ အတူလာလှဲပြီး “ကောင်းလိုက်တဲ့အရသာ” လို့ ပြောသံကြားလိုက်ရတယ်လေ၊
ပြီးတော့ ပြောသေးတာ “နင်ဦးလေးက ပိပိကို သူ့ပါးစပ်နဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ လုပ်မပေးခဲ့ဘူး…. အန်တီက အဲလို အလုပ်ခံချင်နေတာကြာပြီ…. အရမ်းခံလို့ကောင်းတာပဲ” လို့ ပြောပြီး ကျနော်ကို နဖူးလေးနမ်းလိုက်ရင်း ရင်ခွင်ထဲမှာထည့်လို့ ဖက်ထားပါလေရော၊ ကျနော်လဲ ဦးလေးနဲ့ အန်တီဦးတို့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အကြောင်းကို သိချင်တော့ “ဦးလေးက အိမ်မှာ နေ့တိုင်း ပြန်မအိပ်တတ်ဖူးနော်” လို့ အစပျိုးပြီးမေးလိုက်တော့ “နင့်ဦးလေးက စက်လှေကပ်တဲ့ ရွာမှာ မိန်းမနောက်တစ်ယောက် ရနေပြီ” ပြောတော့တာ၊ တစ်ကယ်ပြောတာလား ရွဲ့ပြောတာလားတော့မသိ၊ ကိုယ်ဦးလေး အရင်းဆိုတော့ ဆက်မမေးရဲတော့ဘူး၊ တော်ကြာအမျိုးမကောင်းကြောင်းတွေပါ ပါလာတော့မယ်၊ ကျနော်လဲ အခု အန်တီဦးနဲ့ သာယာနေတာလေး ပျောက်သွားမှာ စိုးတော့ တိတ်တိတ်ကလေး နေလိုက်မိရော၊
အန်တီဦးရဲ့ ကိုယ်လုံးက ပြည့်ပြည့်တင်းတင်းနဲ့ဆိုတော့ ဖက်ထားရတာ နွေးပြီးအိနေတာပဲ၊ စဉ်းစားကြည့်မိလိုက်တာ အန်တီဦးက သူ့ယောင်္ကျားနဲ့ မပြည့်ဝတော့တာတွေ၊ သူ့ယောင်္ကျားဆီက မရခဲ့တာတွေကို ရအောင် ကျနော်ကို ပုံစံသွင်းပြီး သင်ပေးရင်း ခံစားနေတဲ့ပုံပေါ်တယ်၊ ကျနော်လဲ အန်တီဦးအတွက် မွေးပြီး အစားခံရသလို ဖြစ်နေခဲ့ပြီ၊ အိပ်လို့လဲ မရ အတူတူဖက်ထားရင်း မိနစ် ၂ဝ ကျော်လောက်ပဲ ကြာမယ်ထင်တယ်၊ ကျနော်လိင်တံက ပြန်လည်မာကျောလာပြန်ပြီ၊ အန်တီဦးကလဲ အဲဒါကိုသိတော့ လက်နဲ့ လိင်တံကို ကိုင်ပေးပြီး ဆွနေပါလေရော၊ လိင်တံကတော်တော်လေးကို မာတောင်လာတဲ့ အချိန်ရောက်တော့ “ဒီတစ်ခါတော့ အပေါ်ကနေ တက်လုပ်ပေးတော့” လို့ ပြောတာပေါ့၊ အန်တီဦးရဲ့ ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးခံရတာ ကောင်းခဲ့ပေမယ့် လိင်တံကိုလဲ ပိပိထဲကို တစ်ဆုံးထိုးသွင်းပြီး လုပ်လိုက်ချင်နေတယ်လေ၊ ကျနော်အန်တီဦးရဲ့ ကိုယ်လုံးပေါ်ကို တက်လိုက်ပြီး ပေါင်ကြားထဲကို ဝင်လိုက်တယ်၊ အန်တီဦးက ကျနော်လိင်တံကို ကိုင်ပြီး ပိပိအဝကို တေ့ပေးလိုက်တော့ ကျနော်လဲ အားပါးတရ ထိုးသွင်းလိုက်တော့တာပေါ့၊ အရည်တွေကလဲရွှဲ ခလေးမွေးဖူးထားတဲ့ ပိပိဆိုတော့ ရှောရှောရှူရှူပဲ တစ်ဆုံးပဲ ဝင်သွားတော့တာ၊ ရှေ့တိုးနေက်ဆုပ်နဲ့ လုပ်နေသော်လည်း စိတ်ထဲမှာ ဘယ်ဖက်လဲမထိ ညာဖက်လဲမထိ ချောင်ချောင်ချိချိကို ဖြစ်နေတယ်လေ၊ ဒါကို အန်တီဦးက သိတော့ အောက်ကနေ ပေါင်ကိုစိပေးလိုက်တော့ နဲနဲကျပ်သွားပြီး လှေကြီးထိုးရိုးရိုးနဲပေါ့၊ ပထမတစ်ကြိမ်ကလဲ အန်တီဦးရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာပြီးထားတော့ ယခုတစ်ကြိမ် ကျနော်လဲ တော်တော်နဲ့ ပြီးချင်စိတတ်တွေ မဖြစ်မိဖူး၊ ပိပိက ကျယ်နေလို့ ဂလိုင်ခေါက်နေရသလို ဖြစ်နေလို့ထင်တယ်၊
အန်တီဦးက ခဏရပ်ခိုင်းတယ်၊ ပြီတော့ ဒူးထောက်ပြီး လေးဖက်ထောက်နေပေးတော့ နောက်ကနေသွင်းခိုင်းတဲ့ ပုံစံ၊ ကျနော် လိင်တံသွင်းဖို့ကို အရင်ဆုံးအပေါက်ရှာနေရတာပေါ့၊ ပိပိက ပေါင်ကြားထဲမှာ ညှပ်နေတော့ တော်တော်နဲ့ မတွေ့၊ လိင်တံထိပ်နဲ့ စမ်းပြီး တေ့မိတဲ့ အပေါက်ကို ထိုးထဲ့လိုက်တာ၊ တော်တော်တော့ ကျပ်နေပြီး အရင်ထက်ပိုလို့တောင် ဖီလ်းဖြစ်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့် အန်တီဦး ကျနော်ပေါင်ကို လက်နဲ့ လှမ်းရိုက်ပါလေရော၊ အဲဒီတော့မှ လက်နဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်တာ လိင်တံကဖင်ထဲကို ဝင်သွားတာကိုး၊ ဖင်ထဲကို လုပ်ရတာ ခြောက်တော့ ခြောက်သွေ့နေတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျပ်နေတော့ ကျနော်အတွက် ပိုလို့ ကောင်းနေတော့တယ်၊ အန်တီဦးကလဲ ဖင်ကို ညှစ်ပေးထားပုံရတော့ ကျနော်လဲ စိတ်တွေကိုထိန်းမရတော့ဘူး၊ အချက် ၂ဝ လောက် လုပ်ပြီး သုတ်တွေကို ဖင်ထဲကိုပဲ ပန်းလွှတ်လိုက်တော့တာပေါ့၊ ပြီးတော့ လိင်တံကို ဖင်ထဲက မချွတ်ပဲ အန်တီဦးရဲ့ ကျော်ပေါ်ကို ထပ်လျှက် မှောက်သွားပါလေရော၊
အန်တီဦးက အောက်ကနေ “လူဇိုး….လုပ်မယ်လုပ်တော့လဲ ဖင်ထဲကို” တဲ့၊ “နာလို့လား” လို့ ကျနော်က မေးလိုက်တော့ “ကောင်းတော့ကောင်းတယ် နဲနဲအောင့်တယ်” တဲ၊ အဲဒီညက ကျနော် အန်တီဦးကို ၄ ခါလောက် ပိပိနဲ့ ဖင်ကို တစ်လှည့်စီ လုပ်ဖြစ်လိုက်ကြပြီး ည ၁၂ နာရီကျော်တော့ အပြန်အလှန်ဖက်ထားရင်း အိပ်ပျော်သွားကြရော၊ မနက် ၅ နာရီလောက်ရောက်တော့ ကျနော်ရုတ်တရက် နိုးလာပြီး အန်တီဦးက ဘေးမှာ မရှိတော့ဘူး၊ လိင်တံက မာတောင်နေပြန်ပြီး နွေးနွေးထွေးနဲ့ အထိအတွေ့ တစ်ခုကို ခံစားနေရာသလို ဖြစ်နေလို့ မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ၊ အန်တီဦးက ကျနော်ပေါင်ကြားထဲမှာ လှဲနေရင်း လိင်တံကို ပါးစပ်ထဲမှာ ထည့်လို့ လုပ်ပေးနေပြန်ပြီ၊
အန်တီဦးက တော်တော်ထန်တာပဲ၊ သူ့ယောင်္ကျား ကျနော်ဦးလေးနဲ့က မတွေ့ရတာ ကြာလို့ တော်တော်ဆာလောင်နေပုံရတယ်၊ နောက်တော့ ကျနော်ရဲ့ အပေါ်တက်လာပြီး ခါးပေါ်မှာ ခွထိုင်ပြီး လိင်တံကို ပိပိအဝတေ့လို့ ဖိပြီးထိုင်ချလိုက်တော့ လိင်တံက ပိပိထဲ ဝင်သွားပြန်ရော၊ အန်တီဦးဟာ မျက်စိကိုမှိတ်လို့ ကျနော်အပေါ်ကနေ စည်းချက်မှန်မှန်နဲ့ ဆောင့်နေတော့တာ ထင်တောင်မထင်ရဘူး၊ အန်တီဦး အမောခံနိုင်းပြီး ဆက်တိုက်လုပ်နိုင်သားပဲ၊ ကျနော်လဲ သိပ်မကြာပါဘူး ပိပိထဲမှာ တစ်ကြိမ်ပြီးသွားပြန်ရော၊ ပြီးသွားတော့ အန်တီဦးက ကျနော်ရဲ့ ပါးကို နမ်းလိုက်ပြီး အဝတ်အစားတွေကို ပြင်ဝတ်လိုက်ပြီး အိပ်ရာကထလို့ အိပ်ခန်းထဲက ထွက်သွားတော့တယ်လေ၊ ကျနော်ကတော့ မောမောနဲ့ နောက်ထပ်တစ်ရေး ပြန်အိပ်ပျော်သွားရတာပေါ့၊